Nzọụkwụ na-nzọụkwụ nkuzi maka otú nyefee iPhone ka New Computer
> Resource> iPhone> otú nyefee iPhone ka New Computer
"M na nso nso wee ọhụrụ na laptọọpụ na ga-amasị m nyefee ọdịnaya nke m iPhone jidesie a na kọmputa.-A? Olee otú m ga-esi mee nke a?"
Okporo mmiri ochie na kọmputa maka onye ọhụrụ, naanị na-ahụ na i nwere ike adịghị nyefee ọdịnaya site iPhone ndị ọhụrụ kọmputa? ihe a ọmịiko ma ọ bụrụ na ị na-apụghị nyefee ịtụnanya faịlụ, karịsịa egbu egbu songs nke na-adịghị na-azụta n'aka iTunes Store si iPhone ndị ọhụrụ na kọmputa. Nọgidenụ na-Chiefs on. Isiokwu a ga-enye gị a n'ụzọ zuru okè nyefee iPhone music, videos, kọntaktị, SMS, foto, wdg ndị ọhụrụ na kọmputa.
Part 1. Nyefee Music, Videos, na listi ọkpụkpọ site na iPhone ọhụrụ kọmputa
Part 2. Paghaa ngwa site iPhone ọhụrụ kọmputa
Part 1. Nyefee Music, Videos, na Photos si iPhone ọhụrụ kọmputa
Download Wondershare TunesGo. Ọ bụ software na anyị na-aga na-eji nyefee music, vidio, na foto site na iPhone ọhụrụ na kọmputa. Ma Wondershare TunesGo (Windows) na Wondershare TunesGo (Mac) dị. Na akụkụ a, anyị na-elekwasị anya na otú nyefee iPhone ọhụrụ na kọmputa na Wondershare TunesGo (Windows) on PC.
Cheta na: Ugbu a Wondershare TunesGo (Windows) na-akwado na-ebufe music, videos, photos, SMS, kọntaktsị, wdg si iPhone ọhụrụ na kọmputa. Wondershare TunesGo (Mac) nanị na-akwado music, vidio, na photos ugbu a.
Jikọọ gị iPhone na ọhụrụ gị na kọmputa na eriri USB na iPhone abịa na na ẹkedori Wondershare TunesGo. Mgbe ha na-ejikọrọ ịga nke ọma, MobileGo N'ihi na iOS ga-egosipụta gị iPhone ke akpan window.
Nzọụkwụ 2. Nyefee iPhone ọdịnaya ka ọhụrụ kọmputa
Na n'aka ekpe nke isi window, ị pụrụ ịhụ na media, listi ọkpụkpọ, foto, kọntaktị, na SMS-egosipụta. All songs, Pọdkastị, iTunes U, fim, TV na-egosi, music vidio, na audiobooks na Media window. Pịa onye ọ bụla ihe na n'aka ekpe nke window. Wee họrọ kwekọrọ ekwekọ faịlụ na pịa "Export ka" n'elu nke mpio nyefee ha ka ha na kọmputa gị.
Na Wondershare TunesGo (Windows), ị nwere ike nyefee songs, videos, audiobooks, foto, SMS, na kọntaktị site na iPhone ọhụrụ kọmputa mfe.
Mgbe na-akpụ akpụ iPhone ọdịnaya ka ọhụrụ kọmputa, e wezụga media faịlụ, i nwere ike chọrọ nyefee iPhone ngwa ọhụrụ kọmputa. Ị nwere ike ime nke a na iTunes na kọmputa gị. Ikike kọmputa gị na gị Apple ID. Jikọọ gị iPhone na PC na eriri USB na ẹkedori iTunes. Pịa View> Gosi sidebar. Right pịa gị iPhone n'okpuru Ngwaọrụ. Họrọ "Nyefee ịzụrụ" site ndọpụta ndepụta. Na mgbe ahụ, ị pụrụ ịhụ na iPhone ngwa ọdịnala na ị na zụrụ iTunes Store na-agafere iTunes Library.
Nke a bụ n'ihi na olee otú ịkwaga iPhone ọhụrụ kọmputa, gụnyere music, videos, photos, SMS, kọntaktị, ngwa site iPhone ọhụrụ na kọmputa. Anya na a ndu bụ aka.
Gbalịa Wondershare TunesGo nyefee iPhone music ọhụrụ kọmputa ugbu a!
Na-ekiri ndị Video ịmụta otú nyefee faịlụ site na iPhone ka a New Computer